News - Daraasad: Miraha la qalajiyey ee la qalajiyey, suuqa khudaarta oo ka badan $ 60B sanadka 2025
Daraasad: Miro la qalajiyey oo la qalajiyey, suuqa khudaarta oo ka badan $ 60B sanadka 2025
Abriil 11, 2019
KEYWORDS miro la qalajiyey / khudradda la qaboojiyey / khudradda la qaboojiyey / miraha la qaboojiyey / isbeddellada miraha la qaboojiyey / khudradda la qaboojiyey iyo khudradda / khudradda la qaboojiyey / isbeddellada khudaarta la qaboojiyey / miraha iyo khudradda / Global Market Insights
Aasiya Baasifigga waa suuq koritaankiisu aad u sarreeyo oo loogu talagalay miraha iyo khudradda cagaaran ee la qaboojiyey.
Suuqa miraha iyo khudaarta ee la qaboojiyey waxay u badan tahay inuu dhaafo $ 60 bilyan sanadka 2025, sida lagu sheegay warbixin cusub oo cilmi baaris ah oo ay soo saartay Global Market Insights, Shelbyville, Del.
Caannimada sii kordheysa ee cuntada baakadeysan ayaa noqon doonta qodobka ugu weyn ee ka dambeeya koritaanka suuqa miraha iyo khudaarta la qaboojiyey. Badeecada waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa diyaarinta alaabooyin badan oo raashin ah oo la duubay sida maraqyo, casiir, cunno u diyaarsan in la cuno, iwm. Faa'iidooyinka sheygu u leeyahay miraha iyo khudaarta darayga ah waxay kordhin doontaa kobaca warshadaha sanadaha la saadaalinayo. Faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah nolol wanaagsan, qadar sare oo haynta nafaqooyinka, midabka iyo qaab dhismeedka iyo awoodda fuuq-celinta fudud. Arrimahan, oo ay weheliso horumarka teknoolojiyada qalajinta, ayaa kicin doona miraha iyo khudradda la qalajiyey ee la qalajiyey iyo kobaca suuqa miraha sannadaha saadaasha.
Dhanka kale, wacyigelin la'aan ku saabsan badeecada ayaa caqabad ku noqon doonta horumarinta suuqa miraha iyo khudradda ee la qaboojiyey. In kasta oo badeecada loo adeegsaday noocyo badan oo cunto la soo duubay, heerka wacyiga macaamiisha ee ku saabsan faa'iidooyinkiisa weli wuu hooseeyaa, gaar ahaan Aasiya Baasifigga iyo Latin Ameerika, halkaasoo miraha iyo khudradda cusub lagu cuno si aad u weyn.
Khudradda miraha iyo khudradda ah ee la qaboojiyey, qaybo ama xaleefyo ayaa loo isticmaalaa noocyo kala duwan oo cunto ah sida macmacaanka, maraqa, rootiyada, sanduuqyada cuntada, iwm. Qaybta ayaa diiwaangelin doonta dakhli ku dhow $ 30 bilyan dhammaadka sannadka saadaasha. .
Tafaariiqleyda khadka tooska ah ayaa sannadihii la soo dhaafay helayeen caannimo aad u weyn. Macaamiisha ayaa maciin bidaya inay dalbaan dalabyada alaabada cuntada ee baakadeysan ee internetka sababo laxiriira arrimo badan sida nolol ciriiri badan, helitaanka badeecooyin kala duwan oo ku yaal barxad guud, sahlanaanta lacag bixinta iyo kordhinta gelitaanka internetka ee dhaqaalaha soo koraya. Kanalkan qaybinta wuxuu suuqa ku kasban doonaa CAGR kudhowaad 6% sanadaha saadaasha.
Aasiya Baasifigga waa suuq koritaankiisu aad u sarreeyo oo loogu talagalay miraha iyo khudradda cagaaran ee la qaboojiyey. Tirada dadka oo sii kordheysa, kordhinta dakhliga la tuuri karo iyo soo gelida noocyada tafaariiqda kala duwan ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee ka dambeeya horumarinta suuqa Aasiya ee Baasifigga, kaas oo diiwaangelin doona dakhli ka badan $ 15 bilyan dhammaadka sannadka saadaasha.